Ogaden News Agency (ONA) – Daawo:Warbixin Jaaliyada Ogadenia ee Wadanka Canada-Edmonton.
Daawo:Warbixin Jaaliyada Ogadenia ee Wadanka Canada-Edmonton.
Posted by Daljir	/ December 24, 2018
Waxaa wadanka Canada ka howlgasha Jaaliyad balaadhan oo ka soo jeeda asal ahaan Soomalida Ogadenia , waxayna kamdi tahay Jaaliyadaha ugu caansan Wadanka Canada ee ka soo kala jeeda shanta qaaradaha ee dunida.
Wadanka Canada ayaa waxaa ku dhaqan quruuma kala duwan una badan wadamada yurub , Africa iyo Aasiya, dadka qaaradaha iyo wadamada ka soo kala jeeda waxay leeyihiin jaaliyado iyo maamulo sanad walba tartan iyo amaal marin wax qabad ay ku siiso dowlada Canada.
Jaaliyada Ogadenia ee galbeedka Canada gaar ahaan Edmonton ayaa dhowr jeer qaaday amaal marinta ugu sareysa ee la gudoonsiiyo jaaliyadaha kala duwan ee ka howlgala wadankaasi.
Xafiiska Jaaliyada Ogadenia ee magaalada Edmonton ayaa abaal marino kala duwan la siiyay iyadoo sanadkii la soo dhaafay abaal marintaasi kamid ahay in Calanka Ogadenia mudo bil ah ka garab bilig leeyo xarumaha wadanka Canada Calanka Canada.
Sanadka 2019 ayaa waxay Jaaliyada Ogadenia Magaalada Edmonton dadaal xoogan ugu jirtaa siday mar labaad u qaadan lahay abaal marinta jaaliyaadka kala duwan ee reer Canada.
maanta ayaa waxaa ku lan xiisa badan isugu yimid kaadarka iyo maamulka jaaliyada Edmonton waxaan halkaasi lagu soo bandhigay qodob xasaasi ah ooy kamid ahaayeen Abaabulka, Siyaasada , Dhaqaalaha iyo in lala jaan qaado xaalada kala guurka ah ee ka jira wadanka Ogadenia.
Maamulka Jaaliyada Ogadenia ayaa xubnaha ugu warbixiyay xaaladihii ugu danbeeyay ee jaaliyada iyo gudaha Ogadenia, sidoo kale waxaa shirka maanta Jaaliyada Ogadenia ee magaalada Edmonton ka soo qeyb galay PHD.Mahamuud ugaas oo kamid ahaa gudiga wadahadal ONLF iyo Ethiopia oo halkaasi maamulka iyo kaadirka kula wadaagay xaalada Ogadenia iyo halka ay marayaan wadahadala Ethiopia iyo ONLF.